RSS EDT 12:29
• Euphoric End for YOLO Tour • More APABAD Shows in England • Miss UK Nepal Completes Everest Expedition • Dahal Warns of Decisive People's Movement • SC Orders Veep to Take Oath in Nepal • Maoist Protest Baseless: Sharma • Govt to Make Police well-equipped: Rawal • Lower Modikhola Hydel Project Starts Construction • Dailekh Diarrhea Death Toll Reaches 28 • One Killed, 15 Hurt in Mishap • Don’t Comment about Sujata: GP Koirala • Teej Being Celebrated ﻿
Cartoon Archive People's Voice
Links Exchange	Interviews 1234567 8910 Older कलात्मकता कम र ग्ल्यामर बढी भएकाले नेपाली फिल्मको 'ग्रेड' घटेको छ : यशकुमार यसकुमारको परिचय फराकिलो छ । उनी आफूलाई एउटा सिङ्गो कलाकार मान्छन् । जसमा रङ्ग फेर्न सक्ने खुबी छ, 'लेखक, गायक, संगीतकार, नायकका रुपमा' । त्यसैले त यसकुमार पहिले गीत लेख्थे, पछि सङ्गीत भर्न थाले । यतिले मात्र उनको सम्पूर्ण कलाकारको छवि पूरा भएन, उनी गीत गाउन थाले । पछि, उनले आफ्नो परिचय फराकिलो बनाउन आवश्यक ठाने र नायक पनि बने ।
Full Interview.... दूतावास बिक्री निराधार हल्ला हुन्ः राजदूत चालिसे
लन्डनमा रहेको नेपालको महत्वपूर्ण सम्पत्ति नेपाली दुतावास बिक्रीको हल्ला नेपालमा यति व्यापक छ कि गेसोले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत हालिसकेको छ । पूरै बेलायत र संसारभर दूतावास बिक्री प्रकरणलाई लिएर चर्चामा रहेका बेला बेलायतका लागि नेपाली राजदूत सुरेशचन्द्र चालिसे के भन्छन् ? Full Interview.... साल्मेडाँडा ऐतिहासिक प्रोजेक्ट होः गेसो सभापति गुरुङ
गएको मंसिर पाँच गते ६० हजार मानव ढाल बनाइएका बि्रटिश गोर्खा पितृहरुको सम्झानामा १८ जातका धर्मगुरुबाट तीन दिनसम्म किरिया भयो । १२ गते शिलान्यास भइसकेको छ । निर्माण सम्बन्धमा चाहिं इञ्जिनीयरबाट केही प्राविधिक काम बाँकी छन् । अहिले आवश्यक पर्ने ढुङ्गा बोक्ने काम शुरु भइसकेको छ । Full Interview.... नेट एअरको शेयर प्रचण्डलाई पनि खुल्ला छ : विक्रम जोशी
माओवादी, कांग्रेस, एमाले भन्नु सबै नेपाली नै हुन् । यो नेपालीको प्रोजेक्ट हो । त्यसमा तपाईं कांग्रेस, कम्युनिष्ट, माओवादी सबैजना आउन सक्नुहुन्छ । सबैलाई स्वागत नै छ यसमा । राष्ट्रनिर्माणको क्रममा सबैबाट पैसा आए त्यो राम्रै हुन्छ । हामीले त्यसलाई नाईं भन्दैनौं । Full Interview.... लोकतान्त्रिक संविधानले यो कुराको परिकल्पना नै गर्न सक्दैन् : हरिकृष्ण कार्की न्याय सम्पादन गर्ने वा नगर्ने भन्दा पनि उहाँको पद चाहिँ यहाँ कायम रहने कि नरहने ? भन्ने कुरा प्रमुख हो । उहाँ फर्केर आएर पुनः न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्ने कि नसम्हाल्ने ? भन्ने प्रश्न हो । एउटा व्यक्तिले दुई वटा ठाउँको नेतृत् वगर्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने कुरा नै प्रमुख हो । त्यसो भाको हुनाले यो कुनै पनि हालतमा मिल्दैन नमिल्ने कुरा हो । किनभने, कार्यपालिकाले जहिले पनि नागरिक अधिकारहरुलाई सबभन्दा बढी कुल्चिने काम गर्छ ।
Full Interview.... 'प्रचारबाजीभन्दा पनि गुणस्तरीय चलचित्र अहिलेको चुनौती'
मलाई अलि अन्कन्भेन्सनल रोलहरु मन पर्छन् र दर्शकले पनि त्यही रुचाइरहनुभएको छ । मान्छेका सम्वेदनालाई झट्ट छुने खालका पात्रको भूमिका नै मैले अहिलेसम्म निभाएको छु र दर्शकहरुको माया पनि त्यस्तै रोलहरुबाट पाएको छु । कलाकार भएको हिसाबले हरेक नयाँ कथा, हरेक नयाँ चरित्र र निर्देशकको निर्देशनमा भरपर्ने कुरा हो । कि त कुनै कलाकारले आˆनो लागि आफैँ कथा लेख्नुपर्‍यो ।
Full Interview.... सेक्स तनाव कम गर्ने माध्यम हो : स्वामी आनन्द अरुण
सबै धर्मले यौनलाई निषेध गरेको छ तर हामीले यसलाई निषेध गरेको छैन । हामी के भन्छौं भने यो पनि जीवनको एउटा पाटो हो । अहिले जति पनि विकृतिहरु भएका छन्, तीनमा ८० प्रतिशत यौनलाई स्वस्थ तरिकाले नहेर्नु हो । सेक्स असन्तुलनले गर्दा यस्ता विकृतिहरुको सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा साइमन प|mायडले भनेका छन् । अब मान्छेले पहिला जसरी नै सेक्सलाई हेर्ने हो भने मान्छे विक्षिप्त हुन्छ, पागल हुन्छ । मान्छेको जीवन अहिले यति तनावग्रस्त छ कि सेक्स पनि एउटा मिडियम हो मान्छेको तनाव कम गर्ने । Full Interview.... हल्ला भएजस्तो एनी टाइम मस्ती होइन : जिया केसी
विवाहअघि सेक्स म ठीक होइन पनि भन्न सक्दिनँ । नेपाली समाजमा यो पच्दैन । हुन त अहिले समाज धेरै फरवार्ड भइसक्यो । जोसँग तपाईंको बिहे हुन्छजस्तो लाग्छ, जोसँग तपाईंको कुराहरु मिल्छ- त्योसँग गर्दा डेफिनेटल्ली राम्रो हुन्छ होला । Full Interview.... बैशाखमा पनि चुनाव हुँदैनः पोखरेल
एकै वाक्यमा भन्नुपर्दा वैशाखमा निर्वाचन सम्भव छैन । त्यसको पछाडि म मुख्य तीन वटा- राजनीतिक, कानुनी र प्राविधिक कारणहरु देख्छु । यसमा राजनीतिक विषय प्रमुख हो । शान्ति सम्झौतादेखि आजसम्म धेरै निर्णयहरु राजनीतिक सहमतिमा भएका छन् । वैशाखमा चुनाव गर्न पनि दलहरुका बीचमा अहिलेभन्दा पनि बढी घनिष्ट सम्बन्ध हुनुपर्दछ ।
Full Interview.... आवश्यकताभन्दा बढी आतङ्क प्रचार नगर्नुस्ः प्रचण्ड
अहिले निकै कम भएर आएको छ तर अझै पनि छ ।
वैद्य पक्षले त लडाकु बनाउने कुरा आउँदैछ, लडाईं गर्ने रे नि त ?
यो बडो काल्पनिक कुरा हो । लडाईं गर्नु बडो आत्मघाती छ, उहाँहरुका लागि । लडाईंका लागि स्थिति नै छैन । त्यो त भन्ने कुरा मात्रै हो । Full Interview.... आन्दोलन नयाँपुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु : पदमबहादुर गुरुङ
अब हामी बिल्कुल नेपालका युवापुस्तालाई यो आन्दोलनमा सरिक गर्दैछौँ । अब यो आन्दोलन अघि बढाउने, नेपालको बर्बादीको हिसाबकिताब खोज्ने काम युवापुस्ताले गर्नुपर्छ । अहिले पूर्व-पश्चिमका शिक्षित युवाहरुलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छौँ । धेरै आदिवासी जनजाति र गैरआदिवासी जनजातिका युवाहरुले यो आन्दोलनमा चासो देखाइरहेका छन् ।
Full Interview.... प्रचण्डजी हावादारी कुरा गर्नुहुन्छ : नरहरि आचार्य खासगरी माओवादीका प्रचण्ड एकै दिनमा थुपै्र विचार फेरिरहने, कहिले पुनःस्थापना, फेरि चुनाव अनि पुनःस्थापना । कुनै अडान नै छैन । मुलुकले खासगरी राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ अलि ढङ्गको पाउन नसकेको कारणले यी कठिनाईहरु आएका हुन् ।
Full Interview.... बाबुराम सरकार इतिहासकै राष्ट्रघातीः सीपी गजुरेल १२ वर्षको हिसाब दिने त प्रचण्डजीको काम हो । खुल्ला पार्टीको कार्यालय जहाँ पनि हुन्छ, कांग्रेस, एमालेलाई यो आरोप किन लगाउनु हुन्न ? हामी अहिले लण्डनमा कुरा गरिरहेका छौँ, यहाँ पनि यहाँका पार्टीहरुका कार्यालयहरु छन् । त्यस्तो आरोप त लगाउनु भएन नि ! Full Interview.... प्रेम कतिपय प्रेम गर्नेहरुको कथा हो : गोपी सापकोटा
प्रेम कतिपय एक नाटक हो । यसमा एक प्रेमी र तीन छुट्टाछुट्टै प्रेमिकाहरु छन् तर ती तीनै जनामध्ये कसैसँग पनि प्रेमीको विवाह हुँदैन । वास्तवमा यो प्रेम गर्नेहरुको कथा हो । Full Interview.... म माओवादीसँग लचिलो भन्ने कुरै होइनः राजदूत चालिसे
अर्को दुई सय वर्षको इतिहासमा अहिले सम्म यहाँको प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण नगरेको सन्दर्भमा नेपाल भ्रमण गराउन प्रयास गर्ने र तेश्रो लक्ष्य चाहिं युकेमा बस्ने आम नेपाली समुदाय खासगरि गोर्खालीहरुको सामाजिक एकीकरण र उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सशक्तिकरण कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने रहेको थियो । Full Interview.... ‘Try to speak to your child’s teacher every day, even if it is just to say ‘hello’
I started teaching in September 2010 at Barnfield School. Teaching asavocation was something that I had considered when I was studying my A Levels, but instead of pursuing the career I chose to takeabreak from education. Full Interview.... मलाई पद पैसाले कहिल्यै पनि मोहित गरेन : रामेश्वर खनाल
पैसा धन सम्पत्ति कमाउनु नै थियो भने त मैले अर्कै जागिरको लागि प्रयास गर्थें नि ! मलाई पद पैसाले कतै पनि मोहित गरेन र मैले उहाँले भनेको राम्रो ठाउँ पनि त्यही हिसाबमा लिएँ जुन मेरो सोचाइभित्र कहिल्यै पनि परेन । Full Interview.... धेरैको गाली खाए : स्वागत नेपाल, उपन्यासकार
एक दिन हिम्मत गरेर सोधेँ संसारका सबै मान्छे युद्धबाट मरेर आमा र छोरा मात्र बाँचे भने ती आमा छोराले यो धर्तीमा मान्छे जाति बचाउनपर्छ कि पर्दैन ? उहाँले पहिला लेखी सक् म पढेर जे लेख्नुपर्छ लेख्छु भन्नुभयो । उहाँले रुँदैरुदै पढिसक्नु भयो । अनि लेखेर उहाँले आफ्नी बुहारी लोचनालाई दिनुभएछ । Full Interview.... हामीले नेपाली खाना चिनाउन सकेनौं : कृष्ण तिमल्सेना
नेपाली सेफहरु युके आउने क्रम ६० को दशकबाटै शुरु भएको रहेछ । नेपालबाट सिधै युके नआए पनि अन्य मुलुकबाट युके आएर 'सेटल्ड' हुनेमा सेफहरु नै पहिलो भएको बुझियो निजी सेक्टरबाट । तर, संगठनका हिसाबले नेपाली सेफहरुको पहिचान बेलायतस्थित नेपाली समुदायमा हुन नसकेको अवस्था छ ।
Full Interview.... मच्योर्ड मानिसहरुसँग सङ्गत गर्न मन पर्छ : विनिता बराल
हा हा हा... यो कुरा मैले पनि रियलाइज गरेकी छु । मेरा साथीहरु इन्टेलेक्चुअल फिल्डका छन् । मेरो सोचाइ मेरो एजको भन्दा बढी भएकाले होला मेरा साथीहरु बढ्ता उमेरका ! खासगरी मलाई त्यो सङ्गत मन पर्छ । मेरो उमेरका साथीहरु रक्सी खाएर, डिस्को गएर, लभमा परेर टेन्सन भो भन्दै चुक्चुकाइरहेका बेला चाहिँ म मेरा पाका साथीहरुसँग भेट्छु । उहाँहरुसँग गफ गर्छु, उहाँका विचार, ज्ञान लिन्छु । यसो गर्दा मलाई धेरै आनन्द लाग्छ । खासगरी मलाई जो क्रिएटिभ हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग सङ्गत गर्न मन लाग्छ । मच्योर्ड मानिसहरुसँग सङ्गत गर्न मन पर्छ । त्यै भएर ४०/५० एभभका छन् ।
Full Interview.... Latest
Life Style लाहुरे बन्ने लस्कर
१७ हजारभन्दा बढी युवक पंक्तिबद्ध हुँदा युवतीको संख्या २ हजार थियो । पोखराको ब्रिटिस क्याम्पमा ५० युवती गेटपास लिएर क्याम्प प्रवेश गरे पनि रित्तै फर्काइए ।Read more....
Destination Nepal	सराङ्कोटबाट सरर
असोज महिनाको सुरुबाट नै प्याराग्लाइडिङबाट उडान भर्न पर्यटकहरू आउन थाले पनि मंसिर महिना 'पिक आ�Read more....
एक चक्कर नाम्चेको
पाल्पामा गिद्ध बचाउने रेष्टुरेन्ट गोसाइँकुण्डको रोमाञ्चक यात्रा म त लालीगुराँस भएछु
Message Board	rajesh sapkota From United Arab Emirates
Advertisement	UK Upcoming Events	Veiw more	Copy Right NepaliPatra 2010